November 2016 – Gentleman Magazine
30/11/2016 28/11/2016 mmgentlemanmagazine
Oral Sex နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေ ဘာတွေတွေးကြလဲ?? ယနေ့ခေတ် လိင်မှုကိစ္စတွေမှာ ယောင်္ကျားလေး မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပါးစပ်နဲ့ ဖျော်ဖြေမှုပေးတဲ့ Oral Sex က မထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်အတွက် သင်မြတ်နိုးတဲ့မိန်းကလေးကို Oral လုပ်ပေးရာမှာ အဆင်ပြေဖို့အတွက် သိထားသင့်တာတွေရှိပါတယ်။ ဘာက
29/11/2016 28/11/2016 mmgentlemanmagazine
ချစ်သူအပေါ်ယုံမှားသံသယလွန်ကဲနေသည့် လက္ခဏာ(၆)ခု ချစ်သူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးမှာ ယုံကြည်မှုက အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ရေရှည်လက်တွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုမှ ချစ်သူဖြစ်ကာစ စုံတွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။
(၅)မိနစ်အတွင်း လိင်မှုကိစ္စစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း
28/11/2016 26/11/2016 mmgentlemanmagazine
(၅)မိနစ်အတွင်း လိင်မှုကိစ္စစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ အပေးအယူကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသားအကြားမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက် ပိုတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ နှစ်ဦးသားချစ်တင်းနှောရာမှာ သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၊ လိုအပ်ချက်၊ လိုအင်ဆန္ဓတွေကို ပိုပြီးနားလည်လေလေ၊ သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော၊ သင့်ချစ်သူအတွက်ပါ ထူးခြားလေးနက်တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပိုမိုရရှိလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေကို
27/11/2016 23/05/2017 mmgentlemanmagazine
အလန်းစားချစ်သူမိန်းကလေးရှိရင်သိထားသင့်တဲ့အချက်များ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘာမှမပြောနိုင်လောက်အောင် ချစ်မိသွားဖူးပါသလား။ ဒီလိုဖြစ်ရတာ သူမရဲ့အလှတစ်ခုတည်းကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ သင်မကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို ခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနားကို သူမရောက်လာတာနဲ့ ကတုန်ကရင်ဖြစ်သွားတာ၊ အသက်ရှုရပ်တန့်သွားလောက်အောင် မင်တက်တွေဝေသွားရတာ၊ သူမကိုကြည့်လိုက်တိုင်း ဒီလိုမိန်းမလှလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ ကံကြမ္မာကို အတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်နေမိတာ၊ သင့်အနားက သူမထွက်ခွာသွားကို စိုးရိမ်နေရတာ၊
ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ အနားယူချိန် အသုံးချနည်း(၈)ခု
26/11/2016 26/11/2016 mmgentlemanmagazine
ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ အနားယူချိန် အသုံးချနည်း(၈)ခု အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ဘယ်လိုအချိန်ကုန်တတ်ကြသလဲ? အချိန်ရှိသ၍ အလုပ်ချည်းပဲလုပ်နေတာ ကောင်းတယ်ထင်ပါသလား ? တကယ်တော့ အနားယူအပန်းဖြေချိန်၊ စိတ်ပါဝင်စားရာကို လုပ်ဖို့အချိန်မရှိတာက သင့်ကို ပျင်းရိလေးလံလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ထိပ်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိထားပြီး အလုပ်အရမ်းလုပ်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှ အနားယူချိန်တွေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အောင်မြင်နေတဲ့
ယောင်္ကျားလေးများထင်သလို မိန်းကလေးတွေ အရေးမစိုက်သည့် အရာ(၃)ခု
23/11/2016 22/11/2016 moezacgroup
ယောင်္ကျားလေးများထင်သလို မိန်းကလေးတွေ အရေးမစိုက်သည့် အရာ(၃)ခု ယောင်္ကျားတွေက အင်္ဂါဂြိုဟ်က ဆင်းသက်လာပြီး မိန်းမတွေကတော့ သောကြာဂြိုဟ်က လာတယ်လို့ ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ဆိုရိုးစကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ့်သူ မရှိသလို ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ နှစ်မျိုးကလည်း အပြန်အလှန် နားမလည်နိုင်လောက်အောင် ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ များပြားလွန်းလှပါတယ်။ ဒီထဲကမှ